ကိုစိုးထိုက်(ဖဒို)ရဲ့"ဖားစည်သံအမှန်တို့ လွင်ပါစေ"ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒီစာအုပ်ကလေးကို "ငါတို့စာပေ"မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှာ ပထမအကြိမ် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး တန်ဖိုးကတော့ (၃,၅၀၀)ကျပ်ပါ။
".....လူကြီးချင်း နိုင်ငံရေးအယူအဆမတူလို့ စကားများကြတဲ့အခါ ငါတို့တစ်တွေက သေနတ်နဲ့ ထွက်တိုက်ပေးရတာ ထုံးစံဖြစ်နေပြီ..ဒီတိုက်ပွဲက ခဏပဲကြာမှာပါ..တစ်ခုပဲမှာချင်တယ်..မသေစေနဲ့..သေသေချာချာ မှတ်ထားနော်..မသေစေနဲ့..ဒါပဲကွာ.. တိုက်ပွဲပြီးရင် ငါတို့အိမ်မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်.."(စာ - ၅၈)
အထက်ပါစာသားလေးကတော့ မကြာသေးမီ ရက်ပိုင်းကမှထွက်ရှိခဲ့တဲ့ #ကိုစိုးထိုက်(ဖဒို)ရဲ့"ဖားစည်သံအမှန်တို့ လွင်ပါစေ"ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာများကို အခြေခံပြီးရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ အပိုင်း(၁၁)၊ စာ - ၅၈ မှာ အစိုးရတပ်ဖက်မှ ကူညီတိုက်ပွဲဝင်ပေးရမည့် BGF တပ်မှ အစ်ကိုဖြစ်သူက တစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ DKBA ခွဲထွက်အဖွဲ့ဖက်ကနေ တိုက်ပွဲဝင်ရမည့် ညီဖြစ်သူကို မှာတဲ့စကားလေး။ တစ်အူတုံဆင်း ညီအကိုရင်းနှစ်ယောက်၊ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာ အိမ်ချင်းကပ်ရပ်နေပြီး အတူတူတောင်ယာလုပ်ကာ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတဲ့ ညီအကိုတွေ။ ယခုကဲ့သို့ တဖက်နှင့်တဖက်အခြေအနေတင်းမာပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ကြပြီဆိုတော့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာအဖွဲ့အစည်းမတူကြတဲ့ ညီအကိုနှစ်ယောက်၊ စစ်တလင်းမှာ ညီအကိုချင်း သူသေကိုယ်သေတိုက်ကြရတော့မည့်အချိန် အကိုဖြစ်သူက ညီဖြစ်သူကို လေးလေးနက်နက်မှာကြားတဲ့ အမှာစကား.. ဘယ်လောက်ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းသလဲဗျာ..။
အဲ့လို ညီအကိုချင်း၊ သားအဖချင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြားမှာ ရန်ငြိုးအာဃာတမရှိဘဲ အထက်လူကြီးတွေရဲ့"တာဝန်"ဆိုတဲ့စကားကြောင့် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ရင်နာနာနဲ့တိုက်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဘယ်လောက်များ များခဲ့ပြီလဲ??? ပန်းရနံ့တွေအစား ယမ်းနံ့တွေကိုရှူရင်း မငြိမ်းချမ်းတဲ့နယ်မြေမှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ "စစ်"ဆိုတဲ့အရာကို ဘယ်လောက်တောင် နာကျည်းမုန်းတီးနေကြပြီလဲ???စသည်ဖြင့် လူအများမြင်တွေ့ဖူးနေကြ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့သဘာဝအလှတရားတွေနောက်ကွယ်က ညီနောင်ချင်းတိုက်နေရတဲ့"စစ်ပွဲ"တွေအကြောင်း၊ စစ်ပွဲတွေကြားက ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သောက/ဒုက္ခတွေအကြောင်း၊ စစ်ပွဲကပေးတဲ့အကျိုးဆက်တွေကို တပွေ့တပိုက်ခံစားနေရတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝတွေအကြောင်း စသည်ဖြင့် လူအများအလွယ်တကူမသိမမြင်နိုင်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တစ်ဖက်စာမျက်နှာကို လှစ်ဟတင်ပြပေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပါ
စာအုပ်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောပြခင်မှာ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့ "စာရေးသူရဲ့ အမှာစာ"ကနေ စပြီးပြောပါရစေ။
".....ဒီစာအုပ်ကို စာကိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ခံယူချက်များကို မိတ်ဆွေရဲ့ဘေးနားက ကော်ဖီခွက် (သို့မဟုတ်) ဆေးလိပ်ပြာခွက်ထဲ ခဏ ပစ်ချထားပြီးမှ ပထမဆုံးစာမျက်နှာကို စတင် ဖတ်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ"(စာ- ၆)လို့ စာရေးသူရဲ့အမှာစာထဲမှာပါရှိပြီး ပထမဆုံးစာမျက်နှာကို လှန်လိုက်ချိန်မှာပဲ.....
အခန်း (၁) "ဤစာအုပ်အား လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ အတ္တစွဲကြီးသော အမည်းရောင် နှလုံးသားပိုင်ရှင်များ ဖတ်ရှုရန် မသင့်ပါ။"(စာ - ၉)ဆိုတဲ့ ထူးခြားတဲ့ သတိပေးချက်လေးနဲ့စတင်ထားပါတယ်။
စာအုပ်လေးရဲ့ဇာတ်လမ်းအစဖြစ်တဲ့ အပိုင်း(၂)မှာတော့ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူဒေသကို လေ့လာရေးထွက်လာတဲ့ ရန်ကုန်ကသူငယ်ချင်းတသိုက် မြိုင်ကြီးငူမရောက်ခင်က "အေးချမ်းသာယာမြိုင်"ရွာလေးရဲ့"တာဖိပို"ချောင်းဘေးတွင်ဖွင့်ထားတဲ့ "ဖားစည်သံ"ထမင်းဆိုင်မှာ ထမင်းစားဖို့နားကြတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲက လေ့လာစပ်စုတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆိုင်နောက်ဖေးကို အပေါ့အပါးသွားရင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အုတ်ဂူလေးတစ်လုံးအကြောင်းကို မေးမြန်းစုံစမ်းရာကနေ အတိတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို ဆိုင်ရဲ့စားဖိုမှူး ဖထီးကြီးက ပြောပြပေးခဲ့တာကနေ အစပြုထားပါတယ်။ ဖထီးကြီးပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ "စောတာဝါး၊ စောဇူးဘတ်၊ စောသော်မိုး၊ နော်ဝါးဖောနှင့် နော်ဝါးစေး"ဆိုတဲ့ အရမ်းချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းငါးယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ်အတိတ်ဇာတ်လမ်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းငါးယောက်ကြားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား၊ ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ဝှေ့အားကစားအပေါ်ဝါသနာကြီးပုံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် တွေ့ကြုံခံစားနေကြရတဲ့"ပြည်တွင်းစစ်"ရဲ့ဒုက္ခတွေ၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို စာရေးသူက ရသမျိုးစုံခံစားရစေအောင် ဘယ်လိုများရေးသားချယ်မှုန်းထားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုခံစားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
စာအဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပထမဆုံးရေးဖူးတဲ့ စာအုပ်အညွှန်းလေးမို့ အမှားအယွင်းများ၊ လိုအပ်သည်များရှိပါက နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
#၂၂ : ၁၂